Imiqathango A Ukuya Ku-Z
Igama lesiqhelo: ipyrantel (pie RAN xelela)
Igama lebrand: I-Pin-Away, iPinworm Medicine, iAntiminth, iPin-X, iAscarel, iPinworm Caplets
Iifom zedosi: Ukumiswa ngomlomo (144 mg / mL (50 mg / mL base); isiseko 50 mg / mL)
Udidi lweziyobisi: Ukuncedwa
By Uhlaziyo lwe-Intanethi ngoSeptemba 4, 2019. Ibhalwe nguCerner Multum.
ukuhamba ngesihlangu emva kotyando lwenyawo
I-Pyrantel 'i-antihelmintic,' okanye i-anti-worm, amayeza. Ithintela iintshulube ekubeni zikhule okanye zande emzimbeni wakho.
IPyrantel isetyenziselwa ukunyanga usulelo olubangelwa iintshulube .
IPyrantel inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yeyeza kunye nephakheji. Xelela umboneleli wakho ngamnye wezempilo malunga nazo zonke iimeko zakho zonyango, Ukungabikho komzimba , nawo onke amayeza owasebenzisayo.
Akufanele usebenzise i-pyrantel ukuba unobungozi kuyo, okanye ukuba unayo:
Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe okanye uncelisa.
IPyrantel akufuneki inikwe umntwana ongaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala.
Ndingayithatha njani ipyrantel?
Unokuthatha i-pyrantel kunye okanye ngaphandle kokutya. I-pyrantel ingathathwa ngobisi okanye ijusi.
Shukumisa i ukunqunyanyiswa ngomlomo (ulwelo) ngaphambi kokuba ulinganise idosi. Sebenzisa isirinji yedosi ebonelelweyo, okanye sebenzisa isixhobo sokulinganisa idosi (hayi icephe ekhitshini).
Amanani ePyrantel asekwe kubunzima. Landela ngononophelo yonke imiyalelo yedosi.
Ukusebenzisa laxative akuyi kwenza ipyrantel isebenze ngcono okanye ngokukhawuleza. Xelela ugqirha wakho ukuba uyabanjwa.
Biza ugqirha wakho ukuba usabona iipinworms okanye uneempawu emva kokuthatha eli yeza.
Ukuba uhlala nabanye abantu, onke amalungu endlu anokufuna ukuphathwa nge-pyrantel. Isinambuzane sinokusasazeka lula kuye nakubani na osondelelene nawe. Ngalo lonke ixesha landela umkhombandlela kwileyibhile yamayeza malunga nokunika umntwana eli yeza.
Gcina kubushushu begumbi kude nobushushu kunye nobushushu.
I-Pyrantel isetyenziswa njengedosi enye kwaye ayinaso ishedyuli yemihla ngemihla.
Funa unyango olungxamisekileyo okanye utsalele umnxeba kuNcedo lweNetyhefu ku-1-800-222-1222.
Yintoni endifanele ndiyiphephe ngelixa ndithatha ipyrantel?
Gwema ukuqhuba okanye ukwenza imisebenzi eyingozi de ube uyazi ukuba ipyrantel iza kukuchaphazela njani. Ukuphendula kwakho kunokungahambi kakuhle.
Iziphumo ebezingalindelekanga zePyrantel
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu negazi lakho : imihlathi ; ukuphefumla nzima; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Yeka ukusebenzisa i-pyrantel kwaye ubize ugqirha ngokukhawuleza ukuba unayo:
iintlungu esiswini, isicaphucaphu , ukugabha , okanye urhudo ;
kakhulu isiyezi ; okanye
eqhubekayo intloko ebuhlungu .
isisu esibuhlungu, isicaphucaphu, ukugabha;
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela ipyrantel?
Amanye amachiza anokuchaphazela i-pyrantel, kubandakanya amayeza kunye namayeza e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nalo naliphi na iyeza oqala okanye uyeke ukulisebenzisa.
Ngaba iPyrantel iyasebenzisana nezinye iziyobisi?
Ngenisa amanye amayeza ukujonga ingxelo eneenkcukacha.
Yongeza ichiza ukujonga ukudibana Yongeza
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 4.01.
I-N 50 (iMetoprolol Succinate eyandisiweyo-yoKhupha i-50 mg)
I-LDK 150MG NVR (iZykadia 150 mg)
I-PVP iodine mafutha
Yahoo! Isixhobo seScreen sokujonga iStock
I-Tremolo ikhetha kwiGititar
PM3 PM3 & gt & gt (Pramipexole Dihydrochloride 0.5 mg)
I-4H2 (Cetirizine Hydrochloride 10 mg)
D 02 (IGabapentin 100 mg)
indlela yokuthumela iifowuni
Ngaba yi-azelastine steroid
yintoni i-sulphate yentsimbi
ingakanani i-zyrtec endinokuyithatha
venlafaxine hcl yi-37.5mg cap